Nitroatra noho ny hatezerana ny mpandeha : polisy nanakana taksibe saiky niharan’ny fitsaram-bahoaka | NewsMada
Nitroatra noho ny hatezerana ny mpandeha : polisy nanakana taksibe saiky niharan’ny fitsaram-bahoaka
Olona efa ho 200 mahery, nentin’ny hatezerana mafy no nirohotra saiky hamono ilay polisy, nanakana ary saika haka ny taratasin’ity taksibe, amin’ny zotra G, tetsy Anosibe, omaly. Raha nisy kely… fitsaram-bahoaka indray.
Polisy mpanakana fiara iray teny an-toerana no saika niharan’ny fitsaram-bahoaka. Araka ny vaovao voaray teny an-toerana, nahatezitra ny mpandeha tanaty taxi-be ny fihetsika nataony, ary nanaitra ny manodidina ny fitabataban’ny mpandeha ka nampirohotra ny olona rehetra teny. Voalazan’ny loharanom-baovao fa olona efa 200 mahery no indray nirohotra saika hanao fitsaram-bahoaka ity polisy ity. Efa vonona ny hamono ireo vahoaka ary efa nitabataba nifampitarika. Nisy ihany anefa ny olona nahay nandamina ka nahafahan’ilay polisy sy ilay saofera niala teo. Tonga eny an-toerana ny polisy tamin’ny 4×4 naka ilay polisy. Efa tao anatin’ny fahatezerana ny olona teny Anosibe, tamin’io fotoana io, kanefa nilamina ihany rehefa nifandamina teo ny rehetra.
Araka ny fanazavana azo, nosakanan’ilay polisy ilay taxi-be laharana G, ary nalainy ny taratasin’ny fiara. Nahita ny fihetsika nataon’ilay mpitandro filaminana ny olona tao anaty fiara ka tezitra sy nampiaka-peo. “Miaro ny mpamilin’ny fiara hatramin’ny farany izahay, tsy rariny ny ataon’ny polisy ka tsy ekenay”, hoy ireo mpandeha. Nampirongatra azy ireo tampoka teo ny fahitan’ny mponin’Anosibe izany rehetra izany. Soa fa voafehy ihany.
Eo ny hadalan’ny mpamily, ny mety ho fanararaotam-pahefana ataon’ny polisy, saingy mampatahotra ny fihetsiky ny olona teny Anosibe. Mitady hitranga eto Antananarivo ny fitsaramèbahoaka tahaka ny tany amin’ny faritra hafa ireny. Maneho ny tranga toy izao fa misy lonilony, fahatezerana sy fahasorenana any amin’ny vahoaka any. Mety hampirehitra ny fahatezeram-bahoaka ny pitik’afo kely monja, ka amin’izay fotoana izay, na taxi-be na mpivarotra na orinasa na mpitandro filaminana, hatramin’ny mpitondra, mety hiharan’ny fitsaram-bahoaka. Mila fitandremana…